15 / 10 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Oktoobar 15, 2018
Nidaamka Visa Ardayda ee Visa-da ee Bilawday
Nidaamyada Visa ee ardayda isticmaala Antalya ayaa bilaabmay. Ardayda ayaa ka soo dejisan kara kaararka fiisada xarumaha xarumaha oo ay ku fulin karaan nidaamka fiisaha. Nidaamka fiisooyinka kaararka 1 waa in la dhammeeyaa Noofembar 2018. Shabakada gaadiidka dadweynaha [More ...]
Minibus waxay ku dhacdaa meel cusub
Dhismeyaashii ay dhisi lahayd Dawladda Hoose ee Magaaladda Minibus ee u dhow Wadada Tareenka Qaranka ayaa la dhammaystiray. Pistil wuxuu yidhi, "Waxaan ka hortagnay ciriiriga taraafikada anaga oo awood u siineyno in hal mar la rogo. wadareed [More ...]
ARUS iyo TCDD waxay ku soo biireen Seminaarka Isticmaalka Qaababka Isgaadhsiinta Caalamiga ah
Horumarka sayniska iyo teknoolojiyadda ee caalamiga ah iyo kan teknoolojiyadda ee nidaamyada tareenka, wax soo saarka, amniga, [More ...]
Usküdar-Yamanevler Metro Line ayaa Isku Dhiibay Hawlaha Kordhinta Shaqada ee Çekmekoy
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay sii waddaa inay ka shaqeyso khadka tareenka xawaare buuxa. Sababo la xiriira shaqooyinka socda, wadooyinka qaar ayaa la joojiyaa waqti gaaban midkoodna waa M5 Üsküdar - Yamanevler Metro Line. [More ...]
Wasiirka Turhan, Baarista Gaadiidka Gaadiidka ee Trabzon
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay magaaladiisa Trabzon. Wasiirka Turhan, oo ay wehelinayaan Guddoomiyaha Gobolka Trabzon Yucel Yavuz, Duqa Magaalada Trabzon Orhan Fevzi Gumrukcuoglu iyo Wadooyinka Waaweyn ee 10. [More ...]
Tallaabada Koowaad ee Tallaabada ee Istanbul
Kulankii shanaad ee shirarkii Oktoobar ee Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa ka dhacay dhismaha IMM ee ku taal Saraçhane. Golaha dhexdiisa, warbixinta guddiga ee ku saabsan borotokoolka iskaashiga la sixiixey si loo qorsheeyo qorshaha cusub ee magaalada looga dhisi doono agagaarka Kanal Istanbul ayaa looga dooday. [More ...]
Gegada diyaaradaha ee cusub ee magaalada Istanbul ayaa qiyaastii TL 33 ah iyada oo la raacayo baabuur khaas ah oo laga keenay badhtamaha magaalada, laakiin khidmadda baarkinka ayaan wali caddayn. Taksi wuxuu hayaa 190 TL. 29 ayaa loo qorsheeyay in ay ka dhacdo Oktoobar garoonka diyaaradaha ee Istanbul. [More ...]
3. Madaarka Garoonka Daadka
Weli waxaa jira cillado weli muhiim ah oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee Istanbul, kaas oo la furi doono laba toddobaad kadib. Fiidiyoow ay daabacday Ururka Shaqaalaha-Ganacsiga ayaa shaaca ka qaaday in saqafka garoonka diyaaradaha ee ka soo degay biyo ka daadatay roobab badan intii lagu jiray roobabka. [More ...]
Gaadiidka Degaanka ee Kobanheegan Ku Noqoshada Boosta
Tusaalooyinka Kocaeli degmada Metropolitan ee dalka Turkiga kula hab deegaan iyo sii wadaan in ay noqon a degmooyinka horyaal. Dawlada Hoose ee 2015, oo bilowdey isbedelka mashruuca gawaarida gaaska dabiiciga ah ee 1 bisha Febraayo 2016 [More ...]
Tallaalka Dhalinyarada ee Diyaargarowga Sannadlaha ah ee Wadada Gaadiidka ee Izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo adeegsanaysa qaababka sayniska ee loogu talagalay daaweynta geedaha duugga ah ee magaalada oo dhan, ayaa sidoo kale geedaha duulista leh ku qaatay Gazi Boulevard. Shaqooyinku waxay bilaabeen ka dib adeegga taraamka waxayna sii socdaan habeenkii, Oktoobar [More ...]
Ku-xigeenka CHP Tekirdag Ilhami Ozcan Aygun, Çorlu oo u dhaw 8 bishii Luulyo, warbixin khabiir ah oo loo diyaariyay shilalka tareenka ee lagu eedaynayo Maareynta TCDD "fadeexad" ayaa la qiimeeyay. Aygun, kooxda dayactirka iyo dayactirka [More ...]
Muharrem Lab: Taxanaha Canshuurta iyo Canshuurta VAT laga saaro gaadiidka dadweynaha!
Ku xigeenka CHP ee kuxigeenka Shuruucda Sharciga iyo kuxigeenka Deputyanakkale Muharrem Erkek, wuxuu u diyaar garoobay sharciga ka saarida waajibaadka banaanka iyo VAT shidaalka loo isticmaalo gawaarida dadweynaha. Masuuliyada Guud ee CHP ee Siyaasadaha Sharciga [More ...]
Wasiirka Turhan: Ka Waxaan u tegi doonaa Kanaalka Istarliin ee Istanbul sanadkan Bakan
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa yiri: Goobaha dhismaha ee hadda socda waxay ugu yaraan noqon doonaan raaxada hudheel fasalka afraad ah. Waxaa jiri doona biyo kulul, in kabadan 3-4 dadka qol ku dhex jira [More ...]
Samsun Nidaamka Tareenka fudud 8 Age
Duqa Magaalada Samsun Zihni Şahin ayaa uga mahadcelisay ku xigeenka Samsun iyo Maayarkii hore ee Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun Yusuf Ziya Yılmaz sida ay u keentay nidaamkaan gaadiidka dadweynaha Samsun iyada oo loo eegayo xuska 8. [More ...]